गर्मीमा असिन–पसिन हुँदै यसरी जनताको सेवा गर्दैछन् डा केसी (भिडियो)
सप्तरी, साउन २३ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक पटक अनसन बस्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी दुर्गम र विकट स्थानमा गई उपचार गर्न पनि उत्तिकै चाख राख्ने गर्दछन् ।
सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रमा बस्दैनन् स्वास्थ्यकर्मी, नीजि क्लिनिकलाई प्राथमिकता
कलैया, साउन २३ । बाराको सिमरास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी नियमित स्वास्थ्य केन्द्र आउन छाडेपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
सप्तरीको तिलाठीमा बाढीपीडितलाई डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य शिविर
राजविराज, साउन २२ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले बाढीपीडितलाई लक्षित गरी सप्तरीको तिलाठीमा स्वास्थ्य शिविर सन्चालन गरेका छन् ।